Xanuunka COVID-19 oo soo laba kacleeyay gudaha Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaXanuunka COVID-19 oo soo laba kacleeyay gudaha Soomaaliya
February 17, 2021 Abdi Omar Bile Somalia 0
Xarun lagu tacaalo COVID-19 oo kutaala Muqdisho. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xanuunka COVID-19 ayaa soo laba kacleeyay gudaha Soomaaliya, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Sagaal qof ayaa u geeriyootay fayruska halka 100 kiis oo cusub la helay 24-kii saac ee la soo dhaafay, sida ay sheegtay wasaaraddu.
Shaqaalaha dowladda ayaa lagu amray in ay guryahooda ka soo shaqeeyaan laga bilaabo 16-ka bishan Febaraayo, sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay Wasaaradda Shaqaalaha iyo Arrimaha Bulshada ee Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Bilihii u dambeeyay xanuunka ayaa u muuqday in uu hoos u dhacayay gudaha Soomaaliya, balse intii la galay xilliga qaboobaha ayuu kordhay.
Tan iyo markii uu dilaacay COVID-19, Soomaaliya ayaa diiwaangelisay 5,373 oo kiis, halka 163 qof ay u geeriyoodeen fayruska, sida ay sheegayso xog-dhigista Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynihii hore ee dowlada Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa ka tacsiyeeyay geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Cumar Ciise Maxamed (Cumar Faaruuq) oo isaga iyo wiil uu dhalay ay shalay oo Jimce [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa sheegay in Soomaaliya aysan ku qanacsanayn khilaafka siyaasadeed ee ka dhex qarxay dowladdaha Khaliijka dhawaan. Wareysi gaar ah oo ay magaalada Ankara kula yeelatay wakaalada [...]